Isingeniso sesiNgesi sokuCinga nokuTshabalalisa - iZiko eliSiseko
Isingeniso sesiNgesi sokuCinga nokuPhelela
I Sahluko I SOKUCACA NOKUPHILA
Esi sahluko sokuqala UkuCinga nokuPhelela Kuhloselwe ukukwazisa kuwe kuphela ezimbalwa zezifundo eziphathekayo. Zininzi zezifundo ziya kubonakala zingalindelekanga. Abanye babo banokumangalisa. Unokufumanisa ukuba bonke bakhuthaza ukucingisisa. Njengoko ujwayelene nomcinge, kwaye ucinga indlela yakho ngokusebenzisa le ncwadi, uya kufumanisa ukuba iya kuba yicacile ngakumbi, kwaye ukuba usebenza ekuphuhliseni ukuqonda izinto ezithile eziphambili kodwa kwangaphambili zizinto eziyimfihlo zobomi-kwaye ngokukodwa malunga nawe.
Incwadi ichaza injongo yobomi. Le njongo ayikho nje ukufumana ulonwabo, mhlawumbi apha okanye emva koko. Kwakungekho "ukugcina" umphefumlo womntu. Injongo yokwenene yobomi, injongo eya kuyanelisa ukuqonda kunye nokuqiqa, yile: ukuba ngamnye wethu uya kuqonda ngokuqhubekayo kwiidridi eziphakamileyo xa eqonda; oko kukuthi, ukuqonda ubunjani, nangaphakathi naphambili nangaphandle kwemvelo. Ngokwemvelo kubhekiselwe kuyo yonke into enokuyifumana ngeengqondo.
Le ncwadi ikwazisa ngokwakho. Kukuzisa umyalezo malunga nawe: ubuntu bakho obungavaliyo obuhlala emzimbeni wakho. Mhlawumbi uhlale uzichazela wena kunye nomzimba wakho; kwaye xa uzama ukuzicingela wena ngoko ucinge ngomzimba wakho womzimba. Ngokunyanzela umkhwa owuthethe ngomzimba wakho ngokuthi "mna", njengokuba "mna". Ujwayele ukusebenzisa amagama anjengale "xa ndazalwa," kwaye "xa ndifa"; kwaye "ndazibona eglasini," kwaye "ndaziphumla," "ndazigawula," njalo njalo, xa ngokwenene ngumzimba wakho othetha ngawo. Ukuqonda ukuba ungubani okokuqala kufuneka ubone ngokucacileyo ukwahlukana phakathi kwakho nomzimba ohlala kuwo. Inyaniso yokuba usebenzisa igama elithi "umzimba wam" ngokukhawuleza njengoko usebenzisa nayiphi na loo catshulwa esicatshulwa nje ingacetyiswa ukuba awuyikulungele ngokupheleleyo ukwenza lo mbandela obalulekileyo.
Umele ukwazi ukuba awuyena umzimba wakho; kufuneka ukwazi ukuba umzimba wakho awunjalo. Kufuneka ukwazi oku kuba, xa ucinga ngako, uyaqonda ukuba umzimba wakho uhlukile kakhulu namhlanje ukususela oko kwakunjani xa, ebuntwaneni, uqala ukuyiqonda. Ngethuba leminyaka oye wahlala ngayo emzimbeni wakho uyazi ukuba ishintshile: ekudlula kwayo kubuntwaneni nobuncinci kunye nolutsha, kwaye kwimeko yalo yangoku, itshintshile kakhulu. Yaye uyaqaphela ukuba njengoko umzimba wakho ukhule apho kukho utshintsho oluthile kwimbono yakho yehlabathi kunye nesimo sakho sengqondo ngobomi. Kodwa kulo lonke utshintsho uhlale kuwe: oko kukuthi, uziqaphele njengowomntu ofanayo, ofanayo mna, lonke ixesha. Ukucinga kwakho ngale nyaniso elula kukunyanzela ukuba uqaphele ukuba awukho kwaye awukwazi ukuba ngumzimba wakho; kunoko, ukuba umzimba wakho ngumzimba wenyama ohlala kuyo; indlela yokuphila osebenza ngayo; isilwanyana ozama ukuyiqonda, ukuqeqesha nokuqonda.
Uyazi indlela umzimba wakho weza ngayo kweli hlabathi; kodwa ukuba wangena emzimbeni wakho awungazi. Awuzange ungene kuwo de kube lixesha emva kokuba lizalwe; unyaka, mhlawumbi, okanye iminyaka emininzi; kodwa ngale nto uyayazi encinane okanye akukho nto, kuba imemori yakho yomzimba yaqala kuphela emva kokuba ungene emzimbeni wakho. Uyazi into ethile malunga nomzimba apho umzimba wakho oguqukayo uhlanganiswa khona; kodwa yintoni na ukuba awukwazi; awusayi kuqaphela njengento oyiyo emzimbeni wakho. Uyayazi igama apho umzimba wakho uhlukile kwiimpawu zabanye; kwaye oku ufunde ukucinga ngegama lakho. Oko kubaluleke kukuba, ukuba ufanele ukwazi, kungekhona ukuba ungubani nje njengomuntu, kodwa ukuba unjani wena njengomntu ozikhathalelayo ngabanye, kodwa engazange ujonge njengokuba uqobo lwakho, ungubani ongenakuphazamiseka. Uyazi ukuba umzimba wakho uphila, kwaye ukulindela ngokuqinisekileyo ukuba uya kufa; kuba inyaniso ukuba yonke into ephilayo yomzimba ifa ngexesha. Umzimba wakho unesiqalo, kwaye uya kuba nokuphela; kwaye ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni kukuxhomekeke kwimithetho yehlabathi yezinto ezintle, utshintsho, ixesha. Nangona kunjalo, awukho ngendlela efanayo nangemithetho echaphazela umzimba wakho. Nangona umzimba wakho uguqula into ebhalwe kuyo ngokuphindaphindiweyo kunokuba utshintshe iingubo ozigqoke ngazo, ubume bakho abuguquki. Uhlala ufana nawe.
Njengoko ucinga ngeenyaniso ozifumanisayo, nangona unokuba uzama, awukwazi ukucinga ukuba wena uya kuphelisa, nangona kunokuba ungacinga ukuba wena uke waba nesiqalo. Oku kungenxa yokuba ubume bakho buqala kwaye abupheli; Okwenene mna, oMoya ozivelayo, awufi kwaye akaguquki, ngokungapheli ngaphaya kokufikelela kwimeko yokutshintsha, ixesha, lokufa. Kodwa yintoni le nto yakho eyimfihlakalo engaqondakaliyo, awuyazi.
Xa uzibuza, "Yintoni endiyaziyo ukuba ndilapha?" Ubukho bobume bakho buya kubangela ukuba uphendule ngenye indlela efana nale: "Kungakhathaliseki ukuba ndingubani, ndiyazi ukuba ubuncinci ndiyazi; Ndiyazi ubuncinane bokuba uyazi. "Ukuqhubeka kweli qiniso ungathi:" Ngoko ke ndiyazi ukuba mna. Ndiyazi, nokuba ndinguye; kwaye andinguye omnye. Ndiyazi ukuba oko ndizazisa mna-le nto i-I-ness kunye nokuzimela mna ukuba ndivakalelwa ngokucacileyo-ayitshintshi ebomini bam, nangona yonke into endiyazi ngayo ibonakala iyimeko yokutshintsha rhoqo. "Ukuqhubela phambili kule nto ungathi:" Andizi ukuba yintoni le engummangaliso onguyo; kodwa ndiyazi ukuba kulo mzimba womntu, endiyazi ngawo ngexesha lokuvuka kwam, kukho into eyaziwayo; into evakalelwa kunye neminqweno nokucinga, kodwa loo nto ayitshintshi; uyayiqonda into ethanda kwaye ibangela ukuba lo mzimba usebenze, kodwa ngokusobala awunjalo umzimba. Ngokucacileyo le nto iyayiqonda into, nokuba yintoni na, ndiyedwa. "
Ngaloo ndlela, ngokucinga, uya kuzibona ngokwakho njengomzimba ophethe igama kunye nezinye izinto ezichazayo, kodwa njengokuba uzibonele emzimbeni. Ukuzibona emzimbeni kuthiwa, kule ncwadi, umenzi-ngomzimba. Umenzi-ngomzimba ngumxholo apho le ncwadi ibandakanyeke ngakumbi. Ngoko ke uya kuyifumana iluncedo, njengoko ufunda le ncwadi, ukuzicingela ngokwakho njengomenzi wenziwe; ukuzijonga njengomenzi ongafi emzimbeni womntu. Njengoko ufunda ukucinga wena njengomenzi, njengomenzi womzimba wakho, uza kuthatha inyathelo elibalulekileyo ekuqondeni imfihlelo yakho kunye nabanye.
Uyazi umzimba wakho, kunye nazo zonke izinto zendalo, ngeendlela. Kuphela nje ngeendlela zakho zomzimba onokukwazi ukuba nonke usebenze kwihlabathi elingokoqobo. Usebenza ngokucinga. Ukucinga kwakho kubangelwa ukuziva kwakho kunye nomnqweno wakho. Uvakalelwa kwaye unqwenela kwaye ucinga ngokuqhubekayo kwimisebenzi yomzimba; Umsebenzi ongokwenyama umane nje umboniso, ukugqithisa, okwenza umsebenzi wakho wangaphakathi. Umzimba wakho ngeengqondo zawo yintsimbi, indlela, ekhuthazwa ngumvakalelo wakho nomnqweno; ngumshini wakho wendalo.
Ingqondo yakho iphilileyo; iiyunithi ezingabonakali zendalo; ezi zinto ziqala ukunyanzela zonke izakhiwo zomzimba wakho; Zizo zixhobo ezingenabulumko, ziyazi njengemisebenzi yazo. Ingqondo yakho isebenza njengamaziko, abathumeli bezinto ezibonakalayo phakathi kwezinto zendalo kunye nomatshini womntu osebenzayo. Iingqondo zintsimi zendalo enkundleni yakho. Umzimba wakho kunye neengqondo zawo azikho amandla okusebenza ngokuzithandela; akukho ngaphezu kweglavu yakho apho unako ukuziva kwaye wenze. Kunoko, loo mandla nguwe, umqhubi, owaziyo, umenzi osemthethweni.
Ngaphandle kwakho, umenzi, umatshini akakwazi ukufeza nantoni na. Imisebenzi yokuzibandakanya yomzimba wakho-umsebenzi wokwakha, ukugcinwa, ukulungiswa kwamathambo, njalonjalo-uqhutshwa ngokuzenzekelayo ngumshini wokuphefumula ngamnye njengoko usebenza kwaye ngokubambisene nomatshini omkhulu wenguqu. Lo msebenzi wobugcisa emzimbeni wakho uhlala uphazamisekile, nangona kunjalo, ngokucinga kwakho okungenakulinganisela nokungaqhelekanga: umsebenzi uphazamisekile kwaye ungabonakali kwinqanaba elenza ubhubhane lomzimba olonakalisayo kunye nokungavumelani ngokuvumela iimvakalelo zakho kunye neminqweno yokwenza ngaphandle kwakho ulawulo lokuqonda. Ngako oko, ukuze ubunjalo bume bavumeleke ukuhlaziya umatshini wakho ngaphandle kokuphazamiseka kweengcamango zakho kunye nemvakalelo, kunikezelwa ukuba uya kuyeka ukuhamba; Ubume emzimbeni wakho lubonelela ukuba ubophelelo olukugcina kunye neengqondo kunye kunye maxa wambi lukhululekile, ngokukhethekileyo okanye ngokupheleleyo. Ukuphumla okanye ukuvumela ukuhamba kweengqondo kukulala.
Ngethuba umzimba wakho ulala ungagcini nayo; ngandlela-thile ungekho kuyo. Kodwa xa uvuselela umzimba wakho ngokukhawuleza uyazi ukuba nguye "mna" ukuba wawukho ngaphambi kokuba ushiye umzimba wakho ebuthongweni. Umzimba wakho, nokuba uphapheme okanye ulele, awuqapheli nantoni na, naphakade. Into eyaziwayo, into ecinga, nguwe, umenzi osemzimbeni wakho. Oku kuyacaca xa ucinga ukuba awucingi xa umzimba wakho ulele; ubuncinane, ukuba ucinga ngexesha lokulala awukwazi okanye ukhumbule, xa uvusa umzimba wakho, ucinga ntoni.
Ubuthongo bunzulu okanye uphupha. Ubuthongo obunzulu ngumbuso apho uhoxisa khona kuwe, kwaye apho ungabandakanyekanga neengqondo; yiyo imeko apho iingqondo ziyeke ukusebenza ngenxa yesiphumo sokunqunyulwa kuwo amandla asebenza ngazo, yintoni amandla, umenzi. Iphupha liyi-state of partial detachment; urhulumente apho iintliziyo zakho ziphendukile kwizinto zangaphandle zendalo ukuze zisebenze ngaphakathi ngaphakathi kwendalo, zisebenza ngokumalunga nezifundo zezinto ezibonakala ngexesha lokuvuka. Xa, emva kwexesha lokulala obunzima, uphinde ungene emzimbeni wakho, ngokukhawuleza uvusa iingqondo kwaye uqale usebenze kwakhona kwakhona njengomsebenzisi okhaliphile womatshini wakho, oye wacinga, uthetha, kwaye usebenze njengomva-kunye- umnqweno onjalo. Kwaye umkhwa wemihla ngemihla uyazibona ngokukhawuleza nje kunye nomzimba wakho: "Ndilele," ushilo; "Ngoku ndivukile."
Kodwa emzimbeni wakho nangaphandle komzimba wakho, ngokungaqhelekanga uvuke kwaye ulele emva komhla; ebomini nasekufeni, kwaye emva kokufa emva kokufa; kunye nobomi obomi ubomi bakho-ubunjani bakho kunye nesimo sakho sokuzimela. Ubuni bakho buyinto eyinyani, kwaye rhoqo ukhona kunye nawe; kodwa kuyimfihlelo leyo ingqondo ayikwazi ukuyiqonda. Nangona ayinakufunyanwa yiintliziyo owaziyo nokuba khona kwayo. Uyakwazi njengemvakalelo; unesiva sobunikazi; uvakalelo lwe-I-ness, lokuzimela; uvakalelwa, ngaphandle kombuzo okanye ukulinganisa, ukuba unobuntu obufanayo obuphikelela ebomini.
Le ntliziyo yobukho bobubungqina bakho yinto ecacileyo ukuba awukwazi ukucinga ukuba wena emzimbeni wakho wakha waba nayiphi na ngaphandle kwakho; uyazi ukuba uhlala ufana nawe, ngokuqhubekayo uqobo, umenzi omnye. Xa ubeka umzimba wakho ukuba uphumule uze ulale awukwazi ukucinga ukuba ubunikazi bakho buya kugqitywa emva kokuba ukhulule ukubamba kwakho emzimbeni wakho kwaye uvumeleke; ulindele ngokupheleleyo ukuba xa uya kuphinda uqaphele emzimbeni wakho kwaye uqalise usuku olutsha lomsebenzi kuwo, uya kusasa, wena uqobo, umenzi ofanayo.
Njengokulala, ngoko ke ngokufa. Ukufa kodwa ukulala ixesha elide, umhlala phantsi okwesikhashana kule hlabathi labantu. Ukuba ngethuba lokufa uyazi ingqondo yakho ye-I-ness, yokuzimela kwakho, uya kucinga ngexesha elide lokufa akuyi kuphazamisa ukuqhubeka kobunikazi bakho ngaphandle kokulala kwakho ebusuku . Uya kuziva ukuba ngekamva elingalindelekileyo uya kuqhubeka, njengoko uqhubeka usuku nosuku ebudeni obuphela nje. Loo nto, lo, owaziyo yonke impilo yakho yangoku, unguye uqobo, ufana nawe, oye waqonda ngokufanayo ukuqhubeka imihla ngemihla ngemihla yobomi bakho bokuqala.
Nangona ixesha elidlulileyo elide liyimfihlakalo kuwe ngoku, ubomi bakho bokuqala emhlabeni abukho into emangalisayo kunokuba kubomi obu. Njalo kusasa kukho imfihlelo yokubuyela emzimbeni wakho olele-ongazi-apho-, ukungena kuyo ngendlela yakho-ongazi-njani, nokuziqonda kwakhona eli hlabathi lokuzalwa kwaye ukufa kunye nexesha. Kodwa oku kwenzeke ngokukhawuleza, bekude kube yinto engokwemvelo, ukuba ayibonakali iyimfihlakalo; yinto eyenzeka ngokuqhelekileyo. Nangona kunjalo akufani nhlobo kwenkqubo ohamba ngayo xa, ekuqaleni kobukho bobudala, ungena emzimbeni omtsha owenzelwe wena ngokwemvelo, oqeqeshwe waza walungiswa ngabazali bakho okanye ngabagcini bakho njengabantu bakho abatsha kuhlala kwihlabathi, i-mask entsha njengobuntu.
Ubuntu bubunzima, imaski, apho umdlali, umenzi, uthetha. Ngoko ke ngaphezu komzimba. Ukuba ngumntu umzimba womntu kufuneka uphapheme ngokubonakala komenzi kulo. Ngomdlalo osetshintshayo wobomi umenzi uqhubeka kwaye unxibe ubuntu, kwaye usebenza kwaye uthetha njengoko udlala indima yayo. Njengobuntu umenzi ucinga ngokwakhe njengobuntu; oko kukuthi, i-masquerader iyazicingela ngokwayo njengenxalenye edlala kuyo, kwaye iyakhohlwa ngokwayo njengobuntu obungapheliyo kwi-mask.
Kubalulekile ukuqonda malunga nokuphila kwakhona kunye nesiphelo, mhlawumbi akunakwenzeka ukuphendula ngokungafani kwendalo kunye nomlingiswa. Ukuqinisekisa ukuba ukungalingani kokuzalwa kunye nesitishi, ubuncwane kunye nobuhlwempu, impilo kunye nokugula, kubangelwe ngengozi okanye ithuba lokuxhatshazwa komthetho nobulungisa. Ngaphezu koko, ukunika ingqiqo, ubuchule, ubuchule, izipho, amagunya, amandla, ubuhle; okanye, ukungazi, ukungakwazi, ubuthakathaka, ukunyaniseka, ukuphikisa, nobukhulu okanye ubuncinci bomlingani kulezi, njengoko zivela ekuzalweni komzimba, zichasene nokuqonda okufanelekileyo kunye nesizathu. Ubungcwele buhlobene nomzimba; kodwa uhlamvu luyenziwa ngcamango yomntu. Umthetho nobulungisa bulawula eli hlabathi lokuzalwa nokufa, mhlawumbi awakwazi ukuqhubeka kwiikhosi zalo; kunye nomthetho kunye nobulungisa bunzima kwimicimbi yabantu. Kodwa isiphumo asisoloko silandela ngokukhawuleza isizathu. Ukuhlwayela akulandelwa ngokukhawuleza ngokuvunwa. Ngokufanayo, iziphumo zesenzo okanye ingcamango ayinakuvela kude emva kwexesha elide lokungena. Asikwazi ukubona okwenzekayo phakathi kwengcinga kunye nesenzo kunye neziphumo zabo, nangaphezulu kunokuba sibona oko kwenzekayo emhlabathini phakathi kwexesha lokuvuna nokuvuna; kodwa ngamnye umntu emzimbeni womuntu wenza umyalelo wayo njengento ekuthiwa yintoni na okucingayo kunye noko kuyenzayo, nangona kungenako ukuqonda xa ubeka umthetho; kwaye ayayazi nje xa isigqirha siya kugcwaliswa, njengesiphelo, okwangoku okanye ubomi obuzayo emhlabeni.
Usuku kunye nobomi bufana ngokufanayo; zixesha eliphindaphindiweyo lobukho obuqhubekayo apho umenzi wenza umsebenzi walo kunye nokulinganisela iakhawunti yakhe yomntu ngobomi. Ubusuku kunye nokufa, ngokufanayo, zifana kakhulu: xa usuleka ukuze uvumele umzimba wakho uphumule uze ulale, uhamba ngamava afana kakhulu nento oya kuyo xa ushiya umzimba xa usweleka. Iiphupha zakho zobusuku, ngaphezu koko, ziya kufaniswa neemeko zokufa emva kokuba udlulela rhoqo: zombini izigaba zomsebenzi wokuzimela womenzi; Kuzo zombini uhlala kwiingcamango zakho nezenzo zakho, iingqondo zakho zisasebenza kwimvelo, kodwa kwiindawo zangaphakathi zendalo. Kwaye ixesha lokulala ubuthongo obunzima, xa iingqondo zingasasebenzi-imeko yokulibala apho kungekho nkumbulo nantoni na-ihambelana nexesha elingenalutho apho ulinde emngceleni wehlabathi elingokoqobo kuze kube yimini ukudibanisa neengqondo zakho emzimbeni omtsha wenyama: umzimba womntwana okanye umzimba womntwana owenzelwe wena.
Xa uqala ubomi obutsha uyazi, njengentambo. Uvakalelwa kukuba uyinto ecacileyo kwaye ecacileyo. Loo mvakalelo we-I-ness okanye ukuzithemba mhlawumbi yinto yonyani yinto oyazi ngayo ixesha elide. Yonke into imfihlelo. Ngethuba elithile utyhafile, mhlawumbi ucinezelekile, ngomzimba wakho omtsha ongaqhelekanga kunye neendawo ezingaqhelekanga. Kodwa njengoko ufunda indlela yokusebenzisa umzimba wakho kwaye usebenzise iingqondo zawo uthabatha ngokuthe ngcembe ukuba uzibonele. Ngaphezu koko, uqeqeshwe ngabanye abantu ukuziva ukuba umzimba wakho uqobo; wenza ukuba uzizwe ungumzimba.
Ngako oko, njengoko ufika ngokubanzi ngaphantsi kokulawulwa kweengqondo zomzimba wakho, uyazi ukuba uncinci ukuba uyinto ehlukileyo kumzimba ohlala kuwo. Kwaye njengoko ukhula ukusuka ebuntwaneni uya kulahlekelwa ngokuthintana nayo yonke into engabonakaliyo kwintliziyo, okanye ebonakalayo ngokweengqondo; Uza kubanjwa entolongweni kwihlabathi elizimele, uziqaphele kuphela iziganeko, zezinto ezimbi. Ngaphantsi kwezi meko ungumngcwabo ongunaphakade kuwe.
Imfihlelo eyona mkhulu nguKwenu-owenene-oMkhulu oMkhulu ongekho emzimbeni wakho; kungekho kulo okanye kweli hlabathi lokuzalwa nokufa; kodwa, ngokungafiyo ekufeni kwiindawo zonke ezihlala kuyo, ubukho kunye nawe kuzo zonke iinkqubo zakho zokuphila, kuzo zonke izinto zakho zokulala nokufa.
Ukukhangela komntu ngokusisigxina kwinto eyanelisayo kukuba ngokwenene ufuna ukuzimela kwakhe okwenene; ubunikazi, ubuqu kunye no-I-ness, elowo uyanelisayo, kwaye uvakalelwa kwaye unqwenela ukwazi. Ngako oko u-Self okwenene kufuneka uchongwe njengoLwazi-ngokwabo, injongo yangempela engaziwayo yokufuna abantu. Kuyi sigxina, ukufezekiswa, ukuzaliseka, okufunwa kodwa akuzange kufumaneke kwiintlalontle zabantu kunye nomzamo. Ukongezelela, u-Oyiyo ngokwenene ungumeluleki kunye nomgwebi ohlala ehlala esithetha entliziyweni njengesazela kunye nomsebenzi, njengobulungisa nokuqiqa, njengomthetho kunye nobulungisa-ngaphandle kokuba yintoni umntu oza kuba yinto engaphezu kwesilwanyana.
Kukho ukuzimela. Yiyo yoBu-Triune Self, kule ncwadi ebizwa ngokuba yiyunithi enye engabonakaliyo yomntu ongu-trinity: inxalenye yesazi, inxalenye yokucinga, kunye nenxalenye yomenzi. Ingxenye enye yenxenye yomenzi ingangena emzimbeni wesilwanyana kwaye yenze loo mntu umzimba. Leyo nxalenye ebonakalayo yinto ebizwa ngokuba ngumenzi-ngomzimba. Ngomntu ngamnye umenzi onguhlobo luyingxenye engabonakaliyo yoLuntu lweZiThathu, eliyunithi ehlukileyo phakathi kwezinye i-Triune Selves. Izicatshulwa kunye nendawo eziziwayo zoMntu ngamnye kwiZiThathu ziNaphakade, uMmandla woBugxininiso, olujikeleza kweli hlabathi lethu lomntu lokuzalwa nokufa kunye nexesha. Umenzi-ngomzimba ulawulwa yintliziyo kunye nomzimba; Ngoko ke akakwazi ukuqonda ukuba inyaniso yeengcamango zengqondo kunye nolwazi lwazo lweZiqendu zabo. U ziphosa; izinto zeemvakalelo ezingaboniyo, iinqwelo zenyama ziyabamba. Ayiboni ngaphaya kweenjongo zeenjongo; ukwesaba ukuzikhulula ngokwawo kwikhoyili yenyama, uze ume yedwa. Xa umenzi ofanelekileyo ebonakalisa ekulungele kwaye ekulungele ukugxotha ubuhle beengcamango, umcingi nomcwazi wakhe uhlala ekulungele ukunika ukuKhanya endleleni eya kwi-Self-knowledge. Kodwa umenzi ongeyena ofuna ukucinga umculi nomazi ukhangele phesheya. Ubunikazi, okanye ukuzimelela kwangempela, kuye kube yimfihlakalo kubantu bokucinga kwimpucuko yonke.
UPlato, mhlawumbi obalaseleyo kunye nommeli wefilosofi waseGrisi, wasebenzisa njengomyalo kubalandeli bakhe esikolweni sakhe sefilosofi, i-Academy: "Zazi ngokwakho" -tolut seauton. Ukususela kwimibhali yakhe kubonakala ngathi wayenokuqonda ngokuzimeleyo, nangona kungekho namagama awayeyisebenzisileyo aguqulelwe kwisiNgesi njengento enokwaneleyo kunokuba "umphefumlo". UPlato wasebenzisa indlela yokubuza malunga nokufunyanwa koBuqobo boqobo. Kukho ubugcisa obukhulu ekusebenziseni abalinganiswa bakhe; ekuveliseni iimiphumo eziphawulekayo. Indlela yakhe ye-dialectics ilula kwaye inzulu. Umfundi onobucabango engqondweni, othanda ukunyamekela kunokufunda, uya kucinga ukuba uPlato uyamkhathaza. Ngokucacileyo indlela yakhe yokufundisa yayikuqeqesha ingqondo, ukuba ikwazi ukulandela inkambo yokuqiqa, kwaye ingabi libala le mibuzo kunye nezimpendulo kwintetho yencoko; Omnye umntu akayi kukwazi ukugweba izigqibo ezifikelelwa kwiingxoxo. Ngokuqinisekileyo, uPlato akazange azimisele ukubonisa umfundi ngolwazi oluninzi. Kungenzeka ukuba wayefuna ukuqeqesha ingqondo ngokucinga, ngokokuba ukucinga kwakhe kwakuza kukhanyiselwa kwaye kuholele ekufundeni isifundo sakhe. Le ndlela, indlela yeSokrosi, yindlela yokudibanisa imibuzo kunye neempendulo eziqilileyo eziya kulandelwa ngokuqinisekileyo ziya kunceda umntu afunde indlela yokucinga; kwaye ekuqeqesheni ingqondo ukucinga ngokucacileyo uPlato uye wenza okungakumbi kunokuba nayiphi na enye ititshala. Kodwa akukho mibhalo eyehlile kuthi apho echaza oko kukucinga, okanye yintoni engqondweni; okanye oko ku-Self okwenene, okanye indlela yokwazi. Omnye kufuneka akhangele phambili.
Imfundiso yasendulo ye-Indiya ifingqwa kwisicatshulwa esithi: "nguwe" (tat tvam asi). Imfundiso ayifuni icacile, nangona kunjalo, oko "oko" kukuthi okanye yintoni "wena"; okanye ngayiphi indlela "loo" kunye "nawe" zihlobene, okanye ziza kubonwa njani. Kodwa nangona la magama kufuneka abe nefuthe kufuneka achazwe ngokwemigaqo eqondakalayo. Ixabiso lento yonke yefilosofi yase-Indiya-ukuthatha umbono jikelele ngeenqununu-kubonakala ngathi kumntu kukho into engafiyo kwaye isoloko ibe yinto ethile yinto ethile okanye yendalo yonke, njengento yokulahla kolwandle Amanzi yinxalenye yolwandle, okanye njenge-spark yenye yelanga eliphuma kuyo kwaye likhona; kwaye, ngokugqithiseleyo, ukuba le nto yinto ethile, lo menzi oyifumene-okanye, njengoko kuthiwa kwiinqununu eziphambili, i-atman, okanye i-purusha, -ihlukaniswe nendawo yonke into nje kuphela ngesigqubuthelo sokungaqondi kakuhle, i-maya, ibangela umenzi kumntu ukuba acinge ngokuzimeleyo kwaye njengomntu; ngelixa, ootitshala bavakalisa, akukho mntu uqobo ngaphandle kweyona nto yendalo yonke, ebizwa ngokuthi yiBrahman.
Imfundiso, ngokubhekiselele, ukuba iziqwenga ezifakwe kwiBrahman yonke iphela ziphantsi kobukho bomntu kwaye zihambelana nokubandezeleka, ezingazi kakuhle ukuba ziziwa nobani beBrahman; zibophe kwivili lokuzalwa kunye nokufa kunye nokuhlaziywa kwakhona kwendalo, de kube, emva kobudala obudala, zonke iinqununu ziza kuba zihlangene ngokutsha kwiBrahman yonke. Isizathu okanye ukubaluleka okanye ukufunwa kweBrahman ekuhambeni kwenkqubo enzima kwaye ibuhlungu njengokuba iziqhekeza okanye amaconsi azinjalo, nangona kunjalo, kuchazwe. Akunakuboniswa nokuba iBrahman iphela yendalo iphela okanye ingazuza njani kuyo; okanye nokuba nayiphi na iinqununu zayo zinenzuzo; okanye uhlobo lwaluzuza njani. Ubomi bobubomi bonke buya kubonakala bubuhlungu obungenasiphelo ngaphandle kwesizathu okanye isizathu.
Nangona kunjalo, indlela iboniswa ngumntu ofanelekileyo ngokufanelekileyo, ofuna "ukuhlukaniswa," okanye "inkululeko" ekugqithisweni kwengqondo kwimeko yangoku, inokuba ngumzamo wobuqhawe uyasuka ekubeni ubunzima, okanye ukungahambi kakuhle, kwaye uqhubeke phambili ubaleke ngokubanzi kwimvelo. Inkululeko iya kufumaneka, kuthiwa, ngokusebenzisa umendo we-yoga; ngenxa ye-yoga, kuthiwa, ukucinga kungacetyiswa ukuba i-atman, i-purusha-umenzi-oyenzayo-ufunda ukukhupha okanye ukutshabalalisa iimvakalelo kunye neminqweno yakhe, kwaye uyayicima ingqondo engqondweni apho iqondo layo liye laxakishwa khona; Ngako oko kukhululeka ekufuneka kubakho ubukho bomntu, ekugqibeleni kugcinwa kwakhona kwiBrahman yonke.
Konke oku kukho iingqungquthela zenyaniso, ngoko ke zininzi ezilungileyo. U-yogi ufunda ngokwenene ukulawula umzimba wakhe nokuqeqesha iimvakalelo zakhe kunye neminqweno. Unokufunda ukulawula iingqondo zakhe kwimeko apho, ngokuthanda kwakhe, uyazi ukuba izinto zingaphakathi kwimiba yangaphakathi kwizinto eziqhelekileyo ezibonwa ngabantu abangafundanga, kwaye ke ngoko kunokunceda ukuba bahlolisise baze baqhelane namazwe kwimeko iimfihlakalo kubantu abaninzi. Unako, ngokukhawuleza, ukufikelela kumgangatho ophezulu wokulawula ubuninzi bemvelo yendalo. Konke okungaqinisekiyo kumisa umntu ngaphandle kobuninzi bezandla ezingenziwanga. Kodwa nangona inkqubo ye-yoga ifuna "ukukhulula," okanye "ukuhlukanisa," into ebonakalayo kwiingcamango zengqondo, kubonakala kucacile ukuba akwenzeki ukukhokela enye ngaphaya kwemida yendalo. Oku kucacile ngenxa yokungaqondi kakuhle ngengqondo.
Ingqondo eqeqeshiwe kwi-yoga ingqondo yengqondo, ingqiqo. Kulolu hlobo olukhethekileyo lomenzi oluchazwe kumaphepha alandelayo njengengqondo yomzimba, apha ihlukaniswe nezinye iingcinga ezibini apha ngaphambili ezingafani: iingqondo zengqondo nomnqweno womenzi. Ingqondo yomzimba iyona ndlela kuphela apho umenzi ongenakho angasebenza ngayo. Ukusebenza kwengqondo yomzimba kuphelelweyo kwiimeko, kwaye ngoko ke kulondolozo lwendalo. Ngalo mntu uyayiqonda yonke into ebonakalayo: ihlabathi lexesha, leengcamango. Ngenxa yoko, nangona umfundi ehlaziya ingqiqo yakhe, ngexesha elifanayo liyabonakala ukuba uhlala exhomekeke kwintliziyo yakhe, ehlala exhonywe ngokwemvelo, engaxolelwanga nxamnye nobunzima bokuqhubeka bekhona kwimibutho yabantu. Ngamafutshane, nangona kunjalo umenzi angaba njengomqhubi womshini walo womzimba, awukwazi ukuhlukanisa okanye ukukhulula kwindalo, akanakufumana ulwazi ngokwalo okanye kwi-Self yayo yangempela, ngokucinga ngengqondo yomzimba kuphela; ngokuba izifundo ezinjalo ziyimfihlelo engqondweni, kwaye iyakwazi ukuqonda kuphela ngokusebenza ngokufanelekileyo kwengqondo yomzimba kunye nengqondo yomvakalelo kunye nomnqweno.
Akubonakali ukuba iingqondo zengqondo kunye nomnqweno ziqwalaselwe kwiinkqubo zaseMpuma zokucinga. Ubungqina bokuba kufunyanwa kwiincwadi ezine ze-Yoga Aphorisms zePatanjali, nakwiinkcazo ezahlukeneyo kuloo msebenzi wasendulo. I-Patanjali mhlawumbi ihlonishwa kakhulu kwaye imela abafilosofi baseIndiya. Imibhalo yakhe inzulu. Kodwa kubonakala ngathi kunokwenzeka ukuba imfundiso yakhe yoqobo ilahlekile okanye igcinwe imfihlo; ngokuba i-sutras eneenkcukacha ezithandekayo ezithwala igama lakhe ziya kubonakala ziphazamisekile okanye zenzeke into engenakwenzeka kuyo leyo nto ifuna ukuyenza. Ingxaki enjalo ingaqhubeka ingatshintshi ngeenkulungwane ziza kuchazwa kuphela ekukhanyeni kwezinto ezichazwe kwezi zilandelayo kunye nesahluko malunga nokuziva nomnqweno kubantu.
Imfundiso yaseMpuma, njengenye ifilosofi, ixhala imfihlelo yokuzibona emzimbeni womntu, kwaye imfihlelo yobudlelwane phakathi kwaloo nto kunye nomzimba wayo, kunye nendalo, kunye nomhlaba wonke. Kodwa ootitshala base-Indiya ababonisi ukuba bayazi ukuba yintoni le nto eyaziwayo-i-atman, i-purusha, umenzi-owenziwe-yinto ebonakalayo kwindalo: akukho nto ecacileyo eyenziwa phakathi komenzi-ngomzimba kunye nomzimba e yendalo. Ukungaphumeleli ukubona okanye ukubonisa oku kwahlukileyo kubonakala ngenxa yokungaqondi kakuhle okanye ukungaqondi kakuhle iimvakalelo kunye nomnqweno. Kubalulekile ukuba umvakalelo kunye nomnqweno uchazwe kweli nqanaba.
Ukuqwalaselwa komvakalelo kunye nomnqweno uveza enye yezona zifundo ezibalulekileyo nakwizinga elide ezichazwe kule ncwadi. Ukubaluleka kwayo kunye nexabiso alikwazi ukuxhaswa. Ukuqonda kunye nokusetyenziswa kwemvakalelo kunye nomnqweno kunokuthetha ukuguquka kwenkqubela yomntu kunye noBuntu; inokukhulula abenzi kwiingcamango zobuxoki, iinkolelo zobuxoki, iinjongo zobuxoki, abaye bazigcina ebumnyameni. Ichasayo inkolelo yamanga eye yamukelwa ngokungekho mva; inkolelo enokugxininisa kakhulu ekucingeni kwabantu abonakala ukuba akukho mntu ucinga ukubuza imibuzo.
Yiyo: Wonke umntu uye wafundiswa ukuba akholelwe ukuba iinjongo zomzimba zintlanu ngenani, kwaye loo mvakalelo yenye yeengqondo. Iinjongo, njengoko zichazwe kule ncwadi, ziyiyunithi yemvelo, izinto ezizodwa, ziyazi njengemisebenzi yazo kodwa zingenangqiqo. Kukho ezine ezinezinto: ukubona, ukuva, ukunambitha, kunye nokuvumba; kwaye ngengqondo nganye kukho ilungu elikhethekileyo; kodwa akukho nxalenye ekhethekileyo yokuziva ngenxa yokuba iimvakalelo-nangona zivakalelwa ngomzimba-ayikho yomzimba, kungekhona yendalo. Enye yezinto ezimbini zomenzi. Izilwanyana nazo zivakalelwa kwaye zinqwenela, kodwa izilwanyana ziguqulwa ukusuka kumntu, njengoko zichazwe kamva.
Kuyafana okufanayo nangomnqweno, omnye umgangatho womenzi. Ukuvakalelwa kunye nomnqweno kufuneka kuhlale kuqwalaselwa ndawonye, ​​kuba ayinakulinganiswa; ayikwazi ukuba khona ngaphandle komnye; zifana nezibonda zombini zamandla kagesi, macala amabini engqekembe. Ngako-ke le ncwadi isebenzisa i-term compound: i-feelings-and-desire.
Ukuziva-kunye nomnqweno womenzi ngumandla okhaliphileyo ngokuthi imvelo kunye nengqondo ziyashukunyiswa. Kungaphakathi kwamandla okudala ekhoyo; ngaphandle kokuba bonke ubomi bephelile. Ukuziva-kunye-nomnqweno ubugcisa obungenakuqala obungapheliyo kunye nobuchule obungapheliyo obunokuthi zonke izinto ziqondwe, zikhulelwe, zenziwe, ziveliswe, zilawulwe, nokuba ngaba ngababenzileyo kwimibutho yabantu okanye abo baRhulumente wehlabathi, okanye kwi-Intelligences enkulu. Ukuziva-kunye-nomnqweno kukuzo zonke izinto ezinengqiqo.
Emzimbeni womntu, ukuvakalelwa-kunye-nomnqweno yimbane eyaziwayo eyenza lo mshini wendalo. Akukho nenye yeengqondo ezine-uziva. Ukuvakalelwa, into ehambelanayo yomenzi, yinto emzimbeni ovakalelwa kukuba, ovakalelwa ngumzimba kwaye evakalelwa iimpawu ezidluliselwa emzimbeni ngamazwi amane, njengemvakalelo. Ukongezelela, ingaba ngamazinga ahlukeneyo ekuboneni izinto ezibonakalayo eziphezulu, ezifana nomoya, umoya, umboniso; Unokuvakalelwa okulungileyo kunye nokungalunganga, kwaye unokuziva izilumkiso zesazela. Inqweno, umbandela osebenzayo, ngumbane owaziyo ohambisa umzimba ekufezeni injongo yomenzi. Imisebenzi yomenzi ngokufanayo kwimiba yayo yomibini: ngaloo ndlela yonke iminqweno ivela kwimvakalelo, kwaye yonke imvakalelo iphakamisa umnqweno.
Uza kuthatha isinyathelo esibalulekileyo endleleni eya kwi-self-conscious body emzimbeni xa uzicingela ngokwakho njengengqondo ehlakaniphile ekhoyo kwinkqubo yakho yokuzivocavoca, ngokungafaniyo nomzimba ozivelayo, kunye kunye kunye namandla yomnqweno ohamba ngegazi lakho, kodwa oko akuyena igazi. Ukuvakalelwa-kunye-nomnqweno kufanele kuhlanganiswe iingqondo ezine. Ukuqonda kwendawo kunye nomsebenzi wokuvakalelwa-kunye-nomnqweno yiyona nto yokuhamba kwiintlorenko eziye zabangela ukuba abenzi babantu bahlale becinga ukuba bodwa nje ngabantu. Ngaloo nto ingqiqo-nomnqweno kumntu, ifilosofi yaseNdiya ngoku ingaqhubeka ixabiso elitsha.
Imfundiso yaseMpuma iyaqonda ukuba ukuze kufikelele ekuzinikeni kolwazi kumzimba, umntu kufuneka akhululwe kwiingcamango zengqondo, kunye nokucinga okungamanga nokwenza oko okubangelwa ukuhluleka ukulawula iimvakalelo kunye neminqweno yakhe . Kodwa ayikugqithisi ukungaqondi kakuhle kwehlabathi ukuba ukuvakalelwa ngenye yeengqondo zomzimba. Ngokuchasene noko, ootitshala bathetha ukuba uthinte okanye uvakalelwa ngumqondo wesihlanu; ukuba nomnqweno ungowomzimba; kwaye ukuba zombini umvakalelo kunye nomnqweno zizinto zendalo emzimbeni. Ngokwale ngcamango kuthethwa ukuba i-purusha, okanye i-atman-umenzi owenziweyo, umvakalelo-kunye-umnqweno-kufuneka unqande ngokupheleleyo ukuziva, kwaye kufuneka utshabalalise, "bulala," umnqweno.
Ekukhanyeni kwezinto eziboniswe apha malunga nokuziva-kunye nomnqweno, kubonakala ngathi ukufundisa kweMpuma kucebisa ukuba akunakwenzeka. Ubungozi obungapheliyo obunobungozi emzimbeni abukwazi ukuzibulala. Ukuba kwakunokwenzeka ukuba umzimba womntu uphile ngaphandle kokuvakalelwa-kunye nomnqweno, umzimba uya kuba yindlela yokuphefumla.
Ngaphandle kokungaqondi kakuhle kweso sifundo-kunye-nomnqweno ootitshala base-Indiya abanikeli ubungqina bokuba nolwazi okanye ukuqonda kwiZiqu zobuNtu. Kwimeko engabonakaliyo: "nguwe," kufuneka kuthethwe ukuba "wena" obhekiswe kuyo yi-atman, purusha-umntu ngokwakhe; kwaye ukuba "oko" okuthi "wena" uchongiwe ngoku, yiyo yonke into, iBrahman. Akukho nto eyahlukileyo phakathi komenzi kunye nomzimba wayo; kwaye ngokunjalo kukho ukuhluleka okuhambelanayo phakathi kweBrahman kunye neyendalo yonke. Ngemfundiso yeBrahman yehlabathi jikelele njengomthombo kunye nokuphela kwayo yonke into eyenziwe ngokwabo, izigidi ezingabonakali zabenzi ziye zagcinwa ngokungazi kakuhle i-Selves yazo yangempela; kwaye ngaphezu koko sele ulindele, nokuba unqwenele, ukulahlekelwa yiBrahman yendalo yonke into eyona nto ibalulekileyo kunokuba ubani abe nayo: ubume bokwenene, umntu oMntu omkhulu, phakathi kwamanye amaSelves angenakufa.
Nangona kucacile ukuba ifilosofi yaseMpuma idla ukugcina umenzi onamathele kwimvelo, kwaye ngokungazi ngokuzimelela kwayo, kubonakala kungenangqiqo kwaye akunakwenzeka ukuba le mfundiso yayingenakukhulelwa ngokungazi; ukuba babeye baqhutyelwa ngenjongo yokugcina abantu bevela enyanisweni, kwaye ke bayazithoba. Kunoko, kunokwenzeka ukuba iifom ezikhoyo, nangona kunjalo zakudala, ziphela izibonelelo ezingasemva kwenkqubo ekhulile eyayivela kwimpucuko yaphela kwaye yaphantse iyalibala: imfundiso enokuba yayikhanyisa ngokwenene; ocinga ukuba unomvakalelo-kunye nomnqweno njengomntu ongafiyo-emzimbeni; obonise umenzi ngendlela eya kwi-Self yoqobo. Impawu eziqhelekileyo zeefom ezikhoyo zibonisa ukuba okunokwenzeka; kwaye ekuhambeni kwexesha imfundiso yokuqala yayingabonakaliyo kwimfundiso yeBrahman yendalo yonke kunye neemfundiso ezixakekayo eziza kuphelisa ukungafi nokungafuneki njengento engavumelekiyo.
Kukho ubuncwane obungabonakali ngokupheleleyo: IBhagavad Gita, eyona nto ibaluleke kakhulu kwiimpahla zeIndiya. Yiparele yaseIndiya ngaphezu kwexabiso. Iinyaniso ezinikezwa nguKrishna ukuya kwi-Arjuna zincinci, zihle kwaye ziphakade. Kodwa ixesha elide elidlulileyo apho umdlalo uphathiswa kwaye ubandakanyeka, kunye nemfundiso yeVedic yakudala apho iinyaniso zawo zifihliwe kwaye zinyanzeliswe, zenze kube nzima kakhulu ukuba siqonde ukuba ngabaphi abalingiswa uKrishna noArjuna; ukuba zihlobene njani nomnye; ukuba yiyiphi iofisi yomntu ngamnye komnye, ngaphakathi okanye ngaphandle komzimba. Imfundiso kule mizila ehlonishwa ngokufanelekileyo ipheleleyo, kwaye inokuxabiseka kakhulu. Kodwa ixutywe kunye kwaye ifihliwe yi-teksiki ye-archaic kunye neemfundiso zeZibhalo ezibalulekayo, kwaye ukuxabiseka kwayo ngokwenene kuyancipha.
Ngenxa yokungafihlisi ngokucacileyo kwifilosofi yaseMpuma, kunye nenyaniso yokuba ibonakala iphikisanayo njengesikhokelo solwazi lomzimba kunye nokuzimela koqobo, imfundiso yakudala yaseIndiya ibonakala ingathandabuzeki kwaye ingenakwenzeka . Omnye ubuyela eNtshona.
Ngokuphathelele ebuKristeni: Imvelaphi yembali kunye nembali yobuKristu ayifihlakeleyo. Uncwadi oluninzi lukhulile kwiminyaka emininzi yokuzama ukuchaza ukuba zeziphi iimfundiso, okanye oko kwakufunwa ekuqaleni. Ukususela kumaxesha okuqala kukho imfundiso enkulu yemfundiso; kodwa akukho mibhalo eyehlile ebonisa ulwazi lwento eyayihlosiwe kwaye yafundiswa ekuqaleni.
Imizekeliso kunye namazwi aseVangelini zinobubungqina bokubukhulu, ukulula, kunye nenyaniso. Nangona kunjalo abo abo umyalezo omtsha owanikwa kuqala ubonakala bengakuqondi. Ezi ncwadi zichanekileyo, kungenjongo yokuba zilahlekise; kodwa ngelo xesha baxela ukuba kukho intsingiselo yangaphakathi ekhethiweyo; imfundiso eyimfihlo ayifanelekiyo wonke umntu kodwa "umntu oya kukholwa." Ngokuqinisekileyo, iincwadi zizele iimfihlakalo; kwaye kufuneka ukuba banxibe imfundiso eyaziwa ngabantu abambalwa. UBawo, uNyana, uMoya oyiNgcwele: ezi ziyimfihlakalo. Iimfihlakalo, nazo, ziyiNdlu engabonakaliyo kunye nokuzalwa kunye nobomi bukaYesu; ngokunjalo nokubethelelwa kwakhe, ukufa nokuvuka. Imfihlakalo, ngokungangabazeki, izulu nesihogo, kunye noMtyholi, noBukumkani bukaThixo; kuba akunakwenzeka ukuba ezi zifundo zenzelwe ukuba ziqondwe ngokwemvakalelo, kungekhona njengempawu. Ngaphezu koko, kuzo zonke iincwadi zikho imigaqo kunye nemigqaliselo ecacileyo ayifanele ithathelwe ngokoqobo, kodwa kunengqondo engqiqo; kwaye abanye ngokucacileyo banokubaluleka kuphela kumaqela akhethiweyo. Ukongezelela, akunangqiqo ukucinga ukuba imizekeliso nemimangaliso yayinxulumene neenyaniso zangempela. Imfihlelo yonke-kodwa akukho ndawo iyimfihlelo. Yintoni le mfihlelo?
Injongo ebonakalayo yeeVangeli kukufundisa ukuqonda nokuphila kobomi obungaphakathi; Ubomi obungaphakathi obuya kuvuselela umzimba womntu kwaye ngokoyisa ukunqanda ukufa, ukubuyisela umzimba womzimba ebomini obungunaphakade, ummandla apho kuthiwa uwile-"ukuwa" kwawo "yinto yesono." Ngesinye isikhathi kuya kufuneka ibe yinkqubo ecacileyo yokufundisa eyayiza kucacisa kakuhle indlela umntu angaphila ngayo ubomi obungaphakathi: njani umntu, ngokwenza njalo, angene kwi-Self Self real. Ukukholiswa kwemfundiso eyimfihlo kuphakanyiswa kwimibhalo yokuqala yamaKristu ngokubhekiselele kwimfihlelo kunye nemfihlelo. Ngaphezu koko kubonakala ngathi imifanekiso iyimifanekiso, imifanekiso: amabali ahloniphekileyo kunye nemifanekiso yokuthetha, ukukhonza njengezithuthi zokuhambisa imimiselo yokuziphatha kunye nemfundiso yokuziphatha, kodwa kunye neenyaniso ezithile zangaphakathi, njengenxalenye yenkqubo ecacileyo yokufundisa. Nangona kunjalo, iincwadi zeVangeli, njengokuba zikhoyo namhlanje, azikho ukudibanisa okuza kubakho ukulungiselela inkqubo; into eyehlileyo kuthi ayanele. Kwaye, ngokuphathelele imfihlelo apho iimfundiso ezinjalo zifihliwe, akukho nto eyaziwayo okanye ikhowudi esinikwe yona esinokuyivula okanye ukuyichaza.
I-ablest kunye neyona nkcazo ecacileyo yeemfundiso zakuqala esiyaziyo nguPawulos. Amagama awawasebenzisa ayenzelwe ukucacisa intsingiselo yakhe kubo abo babethetha nabo; kodwa ngoku iincwadi zakhe kufuneka zichazwe ngokwemihla yangoku. "Incwadi yokuqala yoPawulos kwabaseKorinte," isahluko seshumi elinesihlanu, ichaza kwaye ukhumbuze iimfundiso ezithile; imiyalelo ethile ecacileyo ngokuphathelele ubomi bokuphila kwangaphakathi. Kodwa kucingelwa ukuba loo mfundiso ingenakuzinikela ekubhaliseni-eya kubonakala iqondakala-okanye mhlawumbi yokuba ilahlekile okanye ishiywe ngaphandle kweemibhalo eziye zahla. Kuzo zonke iziganeko, "iNdlela" ayibonwanga.
Kutheni iinyaniso zanikelwa ngemfihlelo? Isizathu esingaba kukuba imithetho yexesha iyakwenqabela ukusasazeka kweemfundiso ezintsha. Ukujikeleza kwemfundiso engaqhelekanga okanye imfundiso kwakuye kuhlawulwe ngokufa. Ewe, umlando kukuba uYesu wabulawa ngokubethelelwa ngokubethela kwakhe inyaniso kunye nendlela kunye nobomi.
Kodwa namhlanje, kuthiwa kukho inkululeko yentetho: umntu unokuthetha ngaphandle kokwesaba ukufa okukholelwayo malunga neemfihlelo zobomi. Oko nawuphi na umntu ocinga okanye owaziyo ngomgaqo-siseko kunye nokusebenza komzimba womuntu kunye nokuzibona kwakhe okuhlala kuyo, inyaniso okanye izimvo umntu anokuba nazo malunga nobudlelwane phakathi kobuqu kunye noBawo boqobo, kwaye malunga nendlela eya ekuzileni- Le mfuneko ayifihliwe, namhlanje, ngamazwi emfihlelo efuna i-key okanye ikhowudi yokuqonda kwabo. Ngamaxesha anamhlanje onke "amacebiso" kwaye "aphumayo," zonke "iimfihlelo" kunye "nokuqalisa," ngolwimi oluyimfihlo, kufuneka lube ubungqina bokungazi, ukuzithethelela, okanye ukurhweba.
Nangona kukho iimpazamo kunye nokuhlukana kunye nenkolo; Ngaphandle kweentlobo ezininzi zokutolika kweemfundiso zayo eziyimfihlelo, ubuKristu buye kwasasazeka kuzo zonke iindawo zehlabathi. Mhlawumbi ngaphezu kwanoma yiyiphi enye inkolo, iimfundiso zayo ziye zanceda ukutshintsha ihlabathi. Kufuneka kubekho inyaniso kwimfundiso, nangona ingafihlakeleyo, leyo, malunga neminyaka engamawaka amabini, ifinyelele entliziyweni yabantu kwaye yavusa uBuntu kubo.
Iinyaniso ezingunaphakade zivela kwi-Humanity, kwi-Humanity yinto epheleleyo yabo bonke abenzi kwimibutho yabantu. Ezi nyaniso azikwazi ukucinywa okanye ukulibala. Kubuphi na ubudala, kuyo nayiphi na ifilosofi okanye ukholo, iinyaniso ziya kuvela kwaye ziphinde zivele, nokuba ziphi iifom zabo zokutshintsha.
Enye ifomu apho ezinye zeenyaniso zikhutshwe ngayo. Umyalelo weMason udala njengabantu. Inemfundiso ebaluleke kakhulu; kakhulu, kunene, kunokuba ixabiswa yiMasons abagcini babo. Lo myalelo uye walondoloza imithombo yamandulo yeengcaciso ezingabalulekanga malunga nokwakhiwa komzimba ongunaphakade kumntu ongenakufi. Ingqungquthela yayo eyimfihlakalo iyinkxalabo yokwakhiwa kwetempile eyatshatyalaliswayo. Oku kubaluleke kakhulu. Itempile ngumqondiso womzimba womntu ukuba umntu aphinde avuselele, avuselele, abe ngumzimba wenyama oza kuba ngonaphakade, ongunaphakade; umzimba oya kuba yindawo yokuhlala efanelekayo yomenzi ongenakufa. "ILizwi" elilahlekileyo "ngumenzi, lahleka emzimbeni walo womntu-iindawo eziyincithakalo zetempile elide; kodwa oko kuza kuzifumana nje ngokuba umzimba uphinde uvuselelwe kwaye umenzi uyayilawula.
Le ncwadi ikuzisa ngakumbi ukuKhanya, ukukhanya ngakumbi ekucingeni kwakho; Ukukhanya ukufumana "iNdlela" yakho ebomini. UkuKhanya okwenzayo, nangona kunjalo, akukhona ukukhanya kwendalo; KuKhanya okuKutsha; olutsha, kuba, nangona bekukhona ubukho kunye nawe, awukwazi. Kula maphepha kuthiwa nguKhanya lokuKhanya ngaphakathi; NgukuKhanya okuza kukubonisa izinto njengoko kunjalo, ukuKhanya koBulumko odibeneyo. Kungenxa yobukho bokuKhanya ukukwazi ukucinga ngokudala iingcamango; iingcamango zokukubopha kwizinto zendalo okanye ukukukhulula kwizinto zendalo, njengoko ukhetha kwaye uya kuthanda. Ukucinga kwangempela kukubambelela ngokukhawuleza kwaye kugxininise ukuKhanya koNcedo ngaphakathi kwimeko yokucinga. Ngokucinga kwakho wenza ikusasa lakho. Ukucinga ngokufanelekileyo yindlela yokwazi kwakho. Oko kunokukubonisa indlela, kwaye oko kunokukukhokelela endleleni yakho, kukuKhanya koBulumko, ukuKhanya koNcedo ngaphakathi. Kwizahluko ezisezantsi zixelelwa ukuba lo kuKhanya kufuneka kusetyenziswe njani ukuze ukhanyiswe ngakumbi.
Incwadi ibonisa ukuba iingcinga zizinto zangempela, izinto eziyinyani. Izinto eziyodwa kuphela izinto umntu azidalayo iingcinga zakhe. Incwadi ibonisa iinkqubo zengqondo eziza kwenziwa ngayo iingcamango; kwaye iingcinga ezininzi zihlala zihlala ngaphezu komzimba okanye ingqondo apho zidalwe khona. Kubonisa ukuba iingcamango umntu azicingayo ziyizinto ezinokubakho, iimpapasho ezihlaza okwesibhakabhaka, iimpawu, iimpawu apho akha izinto ezibonakalayo eziye zatshintshile ubuso bendalo, wenza into ebizwa ngokuthi indlela yakhe yokuphila kunye impucuko. Iingcamango ziingcamango okanye iifom eziphuma kuyo kunye neyiphi imiphakathi eyakhiweyo kwaye igcinwe kwaye yachithwa. Incwadi ichaza indlela iingcinga ezingabonakaliyo zomntu zigqithisa njengezenzo kunye nezinto kunye neziganeko zobomi bakhe bomntu kunye kunye nokudibanisa ubomi bakhe, ekudaleni iinjongo zakhe ebomini emva kokuphila emhlabeni. Kodwa kubonisa nendlela umntu angafunda ngayo ukucinga ngaphandle kokudala iingcamango, kwaye ngoko ulawula isigqibo sakhe.
Igama lengqondo elisetyenziswa ngokuqhelekileyo lixesha lonke elibandakanya ukusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zokucinga, ngokungakhethi. Ngokuqhelekileyo ukuba loo mntu unengqondo enye. Ngokuqinisekileyo, iingqondo ezintathu ezahlukileyo kunye ezihlukileyo, oko kukuthi, iindlela zokucinga ngokuKhanya koNcedo, zisetyenziswe ngumenzi ongenalo. Ezi, ezikhankanywe ngaphambili, ziyi: ingqondo yomzimba, ingqondo-mvakalelo kunye nomqondo wokuthanda. Ingqondo kukusebenza kwengqondo. Ngenxa yoko ingqondo ayisebenzi ngokuzimela ngaphandle komenzi. Ukusebenza kweengqiqo zontathu kuxhomekeke kwimvakalelo-kunye nomnqweno, umenzi.
Ingqondo yomzimba yinto edlalwa ngokuqhelekileyo njengengqondo, okanye ingqiqo. Ukusebenza komvakalelo-kunye nomnqweno njengomqhubi wendalo, njengomsebenzisi womshini womzimba womntu, kwaye ngoko ubizwa ngokuba yingqondo yomzimba. Yona yodwa ingqondo ejoliswe kuyo kwaye isenza isigaba kunye kunye nangengqondo yomzimba. Ngaloo ndlela isixhobo esisetyenziswa ngumenzi kwaye senze izinto ngaphakathi nangaphakathi nangomcimbi wehlabathi.
Ingqondo-mvakalelo kunye nomnqweno womnqweno kukusebenza komvakalelo kunye nomnqweno kungakhathaliseki nokuba kuhambelana neli hlabathi. Ezi zengqondo zimbini ziphantse ziguqulwe ngokupheleleyo kwaye zilawulwe kwaye zilawulwa ngumqondo womzimba. Ngako oko yonke into yokucinga yabantu yenzelwe ukuhambelana nokucinga kwengqondo yomzimba, ebophelela umenzi kwendalo kunye nokuvimbela ukucinga kwayo njengento ehlukileyo emzimbeni.
Oko namhlanje kuthiwa yi-psychology akusiyo isayensi. Iingqondo zanamhlanje ziye zachazwa njengezifundo zokuziphatha kwabantu. Oku kufuneka kuthathelwe ukuba kuthetha ukufundwa kwezinto ezibonakalayo kwizinto kunye nomoya wendalo owenziwe ngeengqondo kwiindlela zomntu, kunye nokuphendula kwendlela yokusebenza kwendlela efunyenweyo. Kodwa oko akusiyo ingqondo.
Akukho naluphi uhlobo lweengqondo njengesazinzululwazi, de kubekho uhlobo oluthile lokuqonda ukuba yintoni i-psyche, kunye nento engqondweni; kunye nokufezekiswa kweenkqubo zengcamango, indlela osebenza ngayo ingqondo, kunye nezizathu kunye neziphumo zokusebenza kwayo. Iingcali zengqondo zivuma ukuba abazi ukuba zezi zinto ziphi. Ngaphambi kokuba inzululwazi ibe yinyaniso yesayensi kufuneka ibe nokuqonda ukusebenzisana okuhlangeneyo kweengqondo ezintathu zomenzi. Esi sisiseko esingaqhutyelwa sisayensi yinyani yengqondo kunye nolwalamano lwabantu. Kule maphepha kuboniswa indlela iimvakalelo kunye nomnqweno ohambelana ngqo nezesondo, uchaza ukuba kumntu umvakalelo ulawulwa ngumnqweno kwaye ngowomfazi umbandela onqwenelekayo ulawulwa yimvakalelo; kwaye kulowo wonke umntu ukusetyenziswa kweengqondo zomzimba ngoku ngokubanzi kufana nomnye okanye enye yale nto, ngokubhekiselele kwisini somzimba apho basebenza khona; kwaye kuboniswa, ngokubhekiselele, ukuba zonke iintsebenziswano zabantu zixhomekeke ekusebenziseni umzimba-iingqondo zabantu kunye nabasetyhini kwiintlalontle zabo.
Iingcali zengqondo zanamhlanje zikhetha ukungasebenzisi igama elithi umphefumlo, nangona luye lwasetyenziswa ngokubanzi kwisiNgesi kwiinkulungwane ezininzi. Isizathu salokhu kukuba zonke izinto ezithethwa malunga nomoya okanye oko kuyenzayo, okanye injongo ekusebenzisayo, ayikho into ecacileyo kakhulu, engathandabuzekiyo kwaye edidekayo, ukuba iqinisekise ukuba isifundo sesayensi sisifundo. Kunoko, i-psychologists baye bathatha njengesihloko sokufunda kwabo umshini wesilwanyana kunye nokuziphatha kwayo. Sekude kuqondwa kwaye kuvunyelwene ngabantu ngokubanzi, nangona kunjalo, loo mntu wenziwe "umzimba, umphefumlo, nomoya." Akukho mntu unokungabaza ukuba umzimba ungumzimba wezilwanyana; kodwa ngokuphathelele umoya nomphefumlo kuye kwaba nokungaqiniseki okukhulu nokucamngca. Kule mibuzo ebalulekileyo le ncwadi icacile.
Incwadi ibonisa ukuba umphefumlo ophilileyo uyinyaniso neyinyani. Ibonisa ukuba injongo yayo kunye nokusebenza kwayo kubaluleke kakhulu kwisicwangciso sehlabathi jikelele, kwaye ingenakonakala. Kucaciswa ukuba oko kubizwa ngokuba ngumphefumlo yinkalo yendalo-eyisiseko, iyunithi yesigaba; kwaye ukuba le ngqungquthela eyaziwayo kodwa engacacanga yinto ephezulu kakhulu kuyo yonke iindidi zendalo ekubunjweni komzimba: yileyunithi ebalulekileyo yequmrhu kwintlangano yomzimba, iqhube phambili kuloo msebenzi emva kokufunda ixesha elide kwimisebenzi emininzi emininzi luquka uhlobo. Ngenxa yoko isisombululo semithetho yonke yemvelo, le yunithi iyafaneleka ukuba isebenze njengomphathi jikelele wendalo ngokusebenza komzimba womntu; Ngaloo nto ikhonza umenzi ongafiyo kuwo onke ama-existing-existences ngokukhawuleza ukwakha umzimba omzimba wenyama ukuze umenzi angene, kwaye alondoloze kwaye alungise loo mzimba ngokukhawuleza ukuba isigqibo somenzi singadinga, njengoko kumiselwe ngumenzi kucinga.
Le yunithi ibizwa ngokuba yifom-fomu. Umgangatho osebenzayo womoya wokuphefumla uyimoya; Umphefumlo bubomi, umoya, womzimba; ihamba kuyo yonke indawo. Olunye uhlobo lwefomu yokuphefumla, uhlobo oluthile, luhlobo okanye imodeli, iphethini, ukubunjwa, ngokoko isakhiwo somzimba sakhiwa sibe khona kubonakala, kubonakale kubakho ngentshukumo yokuphefumula. Ngaloo ndlela iinkalo ezimbini zefom-fom zimele ubomi kunye nefom, apho isakhiwo sikhona.
Ngoko ingxelo yokuba umntu uqulethwe ngumzimba, umphefumlo kunye nomoya unokuqondakala ngokulula njengokuba kuchaza ukuba umzimba womzimba uqulethwe ngento ebalulekileyo; ukuba umoya ubomi bomzimba, umoya ophilileyo, umoya wokuphila; kwaye umphefumlo ungumhlobo ongaphakathi, umzekelo ongapheliyo, wesakhiwo esibonakalayo; kwaye ngaloo ndlela umphefumlo ophilileyo ngumoya ongapheliyo omoya owenzayo, ugcine, ulungise, uphinde wakha umzimba womntu.
Ifomu yokuphefumla, kwizigaba ezithile zokusebenza kwayo, kubandakanya oko i-Psychology eye yabiza ingqondo engqondweni, kwaye ingakwazi. Ilawula inkqubo ye-nervous involuntary system. Kule msebenzi isebenza ngokubhekiselele kwimbonakalo eyayifumana kwimvelo. Kwakhona kuqhuba ukunyuka kokuzithandela komzimba, njengoko kuchazwe ngumbono-ngomzimba. Ngaloo ndlela isebenza njengelungelo lokuhlala phakathi kwendalo kunye nomfokazi ongafiyo emzimbeni; i-automaton isabela ngokungaboniyo kwimpembelelo yezinto kunye nemimoya yendalo kunye nokucinga komenzi.
Umzimba wakho ngokwenene ungumphumo wokucinga kwakho. Nantoni na engayibonisa ngayo ngempilo okanye izifo, wenza njalo ngokucinga kwakho nangomvakalelo nokuthanda. Umzimba wakho wenyama wenyama ngokwenene ubonakalisa umphefumlo wakho ongapheliyo, ifom-fomu yakho; Ngoko ke ukutshatyalaliswa kweengcinga ezininzi zobomi. Ingxelo ebonakalayo yokucinga kwakho kunye nezenzo njengomenzi, kuze kube ngoku. Kule nyaniso kukho intsholongwane yomzimba nokungafi.
Akukho nto imangalisa namhlanje kwimbono yokuba umntu uya kufumana ukungafi ngokuthe ngenye imini; ukuba ekugqibeleni uza kuphinda abuye aphelelwe umgangatho wokuphelela apho wawa khona ekuqaleni. Imfundiso enjalo kwiifom ezahlukileyo ngoku ikhoyo ngoku eWest malunga namawaka amabini amawaka. Ngelo xesha liye lasasazeka kwihlabathi kangangokuba amakhulu eemitha zabenzi, aphinde akhona emhlabeni ngokudlulela kwiinkulungwane, sele eziswe ekuqhagamshelaneni ngokuphindaphindiweyo kunye nembono njengenyaniso yangaphakathi. Nangona kusekho ukuqonda okuncinci, kwaye kusenjalo ukucinga ngako; nangona iphikisiwe ukuba iyanelise iimvakalelo kunye neminqweno yabantu abahlukeneyo; kwaye nangona ingaqwalaselwa ngokuhlukileyo namhlanje ngokungabandakanyeki, ukunyaniseka, okanye ukwesaba, le ngcamango inxalenye yendlela yokucinga yomntu okhoyo wangoku, kwaye ngoko ke ufanelwe ukucingisisa.
Ezinye iinkcazo kule ncwadi, nangona kunjalo, ziya kubonakala zingalindelekanga, nokuba ziyinto emangalisayo, kude kubekwe ingcamango eyaneleyo. Ngokomzekelo: imbono yokuba umzimba womzimba ungenziwa ungonakali, unaphakade; inokuphinda ivuselelwe iphinde ibuyiselwe kwimeko yokufezekisa kunye nobomi obungunaphakade apho umenzi wamandulo adlulele khona; kwaye, ngokugqithiseleyo, ingcamango yokuba loo meko yokufezekiswa nobomi obungunaphakade iya kufumana, kungekhona emva kokufa, kungekhona kwimizuzu emininzi engapheliyo, kodwa ehlabathini lomzimba xa umntu ephila. Oku kunokwenzeka kubonakale kunzima, kodwa xa kuhlolwe ingqiqo kuya kubonakala kungenangqiqo.
Yintoni engenangqiqo kukuba umzimba womzimba kufuneka ufe; kusenangqiqo kakhulu isiphakamiso sokuba kukufa kuphela ukuba umntu aphile ngonaphakade. Iingcali zenzululwazi ziye zatsho ukuba akukho sizathu sokuba kutheni ukuba umzimba womzimba awufanele ukwandiswa ngokungapheliyo, nangona kungabonakali ukuba oku kuyenzeka njani. Ngokuqinisekileyo, imizimba yabantu ihlale iphantsi kokufa; kodwa bafa nje ngokuba akukho mzamo owenziwe ukuvuselela kwakhona. Kule ncwadi, kwisahluko INdlela Enkulu, ichazwa indlela umzimba onokubuyiselwa ngayo, ungabuyiselwa kwimeko yokufezekisa kwaye yenziwe itempile ye-Triune Self.
Amandla okulala ngesinye imfihlakalo umntu kufuneka asombulule. Kuya kuba yintsikelelo. Kunoko, umntu uhlala esenza utshaba lwakhe, uMtyholi wakhe, ohlala naye kunye nalapho angenakubalekela khona. Le ncwadi ibonisa indlela, ngokucinga, ukuyisebenzisa njengamandla amakhulu okufanele ukuba yiyo; kunye nendlela yokuqonda nokuzithiba ukuvuselela umzimba kunye nokufezekisa iinjongo zomntu kunye neminqweno kwiiyure eziqhubekayo zokufezekisa.
Wonke umntu uyimfihlakalo emibini: imfihlelo yakhe, kunye nemfihlelo yomzimba aphakathi kwayo. Unayo kwaye isitshixo kunye nencoko kwimfihlelo emibini. Umzimba uyisikhiye, kwaye uyintloko kwilokhi. Injongo yale ncwadi kukuxelela ukuba uziqonde njani njengesihluthulelo semfihlelo yakho; indlela yokuzifumana emzimbeni; indlela yokufumana nokwazi kwakho uqobo njengolwazi loLwazi; indlela yokuzisebenzisa njengesihluthulelo sokuvula ingqungquthela yomzimba wakho; kwaye, ngomzimba wakho, indlela yokuqonda nokuqonda imfihlelo yemvelo. Ulapha, kwaye ungumqhubi womnye umatshini womzimba wendalo; iyakwenza kwaye iphendule kunye kunye nokubhekiselele kwimvelo. Xa usixazulula imfihlelo yakho ngokwakho njengomenzi we-Self-knowledge yakho kunye nomsebenzisi womshini wakho womzimba, uya kukwazi-kwimiba nganye kwaye yonke into-ukuba imisebenzi yamacandelo omzimba wakho yimithetho yendalo. Uya kwandula wazi owaziwayo kunye nemithetho engaziwayo yemvelo, kwaye ukwazi ukusebenza ngokuvisisana nomshini omkhulu wendalo ngomshini ngamnye womzimba apho ukhona.
Enye imfihlelo ixesha. Ixesha lihlala likhona njengesihloko esiqhelekileyo sencoko; kodwa xa umntu ezama ukucinga ngako kwaye axelele oko kuyenzeka, kuba yinto engacacanga, engaqhelekanga; ayinakubanjwa, umntu akakwazi ukuyiqonda; iyakwazi, iphunyuke, kwaye ingaphezu kweyodwa. Oko akuzange kuchazwe.
Ixesha kukutshintshwa kweeyunithi, okanye kwimimandla yeeyunithi, ngokuhambelana kwabo. Le ncazelo elula isebenza kuyo yonke indawo kwaye phantsi kwayo yonke imeko okanye imeko, kodwa kufuneka icatshangelwe kwaye isetyenziswe ngaphambi kokuyiqonda. Umenzi kufuneka aqonde ixesha xa esemzimbeni, vuka. Ixesha libonakala lihlukile kwezinye ihlabathi kunye nelizwe. Ixesha lexesha lokuzibona elibonakalayo lingafaneli lilingane ngelixa livuke ngamaphupha, okanye ngexesha lokulala, okanye xa umzimba ufa, okanye xa udlula emva kokufa, okanye ngelixa ulinde isakhiwo kunye nokuzalwa Umzimba omtsha uya kuwudla ilifa emhlabeni. Ngamnye kwezi zihlandlo zisexesha "Ekuqaleni," ukulandelana kunye nokuphela. Ixesha libonakala likhawuleza ebuntwaneni, liqhube ebusheni, kunye nohlanga ngokukhawuleza kwandyondyo de kube sekufeni komzimba.
Ixesha liyiwebhu yenguqu, ekhutshwe kwixesha elingunaphakade kumzimba womntu. Ingqungquthela apho iwebhu iboshwe ngayo ifom-fom. Ingqondo yomzimba ngumenzi kunye nomqhubi we-loom, i-spinner yewebhu, kunye ne-weaver yezikhumba ezibizwa ngokuba "zidlulileyo" okanye "zikhoyo" okanye "ikusasa". Ukucinga kwenza i-clock of time, ingcinga ichukumisa i-web yexesha, icinga ukuba i-veil yexesha; kunye nomqondo womzimba ukucinga.
UKUBHALWA kungenye imfihlakalo, eyona nto inkulu kunayo yonke imfihlelo. Igama elithi Ubulumko lihlukile; liLizwi lesiNgesi elidibeneyo; elilinganayo alibonakali kwezinye iilwimi. Ixabiso layo elibaluleke kakhulu kwaye inentsingiselo ayikho, nangona kunjalo, iyaxabiswa. Oku kuya kubonakala ekusebenziseni ukuba igama lenziwe ukukhonza. Ukunika imizekelo eqhelekileyo yokusetyenziswa kakubi: Kuvezwa ngamazwi athi "ukuqonda kwam," kunye "nokuqonda komntu"; kunye nokukhathazeka kwezilwanyana, ukuqonda komntu, umzimba, i-psychic, i-cosmic kunye nezinye iintlobo zokuqonda. Yaye ichazwa njengengqondo eqhelekileyo, kwaye inkulu kwaye inzulu, iphantsi kwaye iphantsi, ngaphakathi nangaphandle, ingqalelo; kunye nolwazi olupheleleyo kunye noluhlu. Ukuthethwa kwakhona kuyavalelwa ngokuqala kokuqonda, kunye nokutshintsha kwengqondo. Omnye uva abantu bathi baye bafumana okanye babangela ukukhula, okanye ukongezwa, okanye ukwandiswa, ukuqonda. Ukusetyenziswa kakubi kakhulu kwegama kulamagama athile: ukulahlekelwa ingqondo, ukubamba ingqalelo; ukuphinda usebenzise, ​​ukuhlakulela ingqalelo. Kwaye umntu uva, ngokubhekiselele, kumazwe ahlukeneyo, kunye neeplani, kunye nee-degrees, kunye nemiqathango yolwazi. Ubunono bukhulu kakhulu ukuba bufaneleke, bunyaniswe okanye bubekwe. Ngokuqwalasela le nyaniso le ncwadi isebenzisa ibinzana: ukuba uqaphele, okanye njengoko, okanye. Ukucacisa: nayiphi na into eyaziwayo ingqalelo izinto ezithile, okanye njengoko ikhona, okanye iyayiqonda ethile iqondo lokuqonda.
Ubumnono yiyona nto yokugqibela, eyiyo yokugqibela. Ubumnandi kukuba ngokubonakala kwazo zonke izinto. Imfihlelo yazo zonke iimfihlakalo, ayikwazi ukuqonda. Ngaphandle kwayo akukho nto ingayiqonda; akukho mntu unokucinga; akukho nto, akukho nhlangano, akukho mandla, akukho yunithi, inokwenza nayiphi na umsebenzi. Sekunjalo uNgqiqo ngokwawo awunamsebenzi: awusebenzi naluphi na uhlobo; ubukho, yonke indawo. Kwaye ngenxa yobungqina bayo ukuba zonke izinto ziyazi kakuhle nayiphi na into eyaziwayo. Ubulumko akusiyo imbangela. Ayikwazi ukushukunyiswa okanye isetyenziswe okanye nayiphi na indlela echaphazelekayo nayiphi na into. Ingqalelo ayikho imbangela yento, kwaye ayixhomekeke kuyo nayiphi na into. Ayinyuli okanye iyanciphise, yandisa, yandisa, iyakontrakthi okanye itshintshe; okanye ahluke nangayiphi indlela. Nangona kukho iibakala ezingenakubalwa ekuqapheliseni, akukho zigaba zeNkathazo: akukho iiplani, akukho zihlandlo; akukho mabakala, ukwahlukana, okanye ukuhluka kweyiphi na uhlobo; yinto efanayo kuyo yonke indawo, nakuzo zonke izinto, ukusuka kwiyunithi yendalo ephezulu ukuya kwi-Intelligence Intelligence. Ubulumko abukho iipropati, akukho mpawu, akukho zixhobo; ayinayo; ayikwazi ukufumana. Ubulumko abuzange buqalwe; ayikwazi ukuyeka ukuba. Ubulumko.
Kulo lonke ubomi bakho emhlabeni uye wafuna ngokungapheli, ulindele okanye ukhangela umntu okanye into ekhoyo. Ngokungaqhelekanga uzive ukuba ukuba unokufumana kodwa ukuba ufuna ukuphi, unelisekile, unelisekile. Ukukhunjulwa okukhunjulwayo kwexesha eliphakamileyo; Ziyimvakalelo yangoku yexesha lakho elililiweyo; bayanyanzelisa ukunyamezela kwehlabathi okuqhubekayo okugaya amava kunye nokungabi nalutho kwimizamo yabantu. Usenokuba ufuna ukuwanelisa loo ntsapho kunye, ngomtshato, ngabantwana, phakathi kwabahlobo; okanye, kwishishini, ubutyebi, uhambo, ukufumanisa, uzuko, igunya, negunya-okanye nayiphi na enye imfihlakalo engabonakaliyo entliziyweni yakho. Kodwa akukho nto yeengqondo inokwenelisa ngokwenene loo mbono. Isizathu kukuba ulahlekile-yinto elahlekileyo kodwa engenakulinganiswa yento yokungafi. Iminyaka edlulileyo, wena, njengemvakalelo-kunye nomnqweno, inxalenye yenzalo, ushiye iingcamango zomfundi kunye nowaziyo. Ngoko ulahlekelwe ngokwakho ngenxa yokuba, ngaphandle kokuqonda ngokuzimela kwakho kweThathu, awukwazi ukuziqonda, ukulangazelela kwakho, nokulahleka kwakho. Ngoko ke maxa wambi uziziva unesizungu. Ulibale iindawo ezininzi ozidla ngokudlala kule hlabathi, njengobuntu; kwaye ukhohliwe ubuhle bokwenene kunye namandla owakwaziyo ngelixa ucinga kunye nomfundi wakho kwiindawo zokuhlala. Kodwa wena, njengomenzi, ulangazelela inyunyano elinganisiweyo yengqondo yakho kunye nomnqweno emzimbeni ophelileyo, ukwenzela ukuba uza kuphinda ube kunye neengcinga zakho kunye neenkcukacha zomntu, njenge-Self Triune, kwindawo yokuhlala. Kwimibhalo yamandulo kukho konke okuye kwandula ukuba kuhamba, kwiibinzana ezifana "nesono sokuqala," "ukuwa komntu," njengokuvela kwimeko kunye nomhlaba apho unelisekile. Lo mmandla kunye nommandla ovela kuwo awukwazi ukuyeka ukuba; inokubuyiselwa ngabaphilayo, kodwa kungekhona emva kokufa kwabafileyo.
Akufanele uzive uwedwa. Umcingi wakho kunye nomnazi unawe. Kulo olwandle okanye ehlathini, entabeni okanye elula, ekukhanyeni kwelanga okanye kwisithunzi, kwisihlwele okanye kwedwa; naphi na apho ukhona, ukucinga kwakho nokwazi ukuzimela kunakho. U-Self wakho woqobo uya kukukhusela, ngoku ukuvumela ukuba ukhuselwe. Umcingi wakho kunye nomfundi uyakulungele ukubuya kwakho, nangona kunjalo kukude kukuthathele ukuba ufumane kwaye ulandele indlela kwaye ugcine ngokugqithiseleyo ekhaya kunye nabo njengoTyun Self.
Okwangoku awuyi kubakho, awukwazi ukuba, unelisekile nantoni na ngaphantsi koLwazi loLwazi. Wena, njengemvakalelo-kunye-nomnqweno, unomsebenzi onoxanduva lokuzimela kwakho kweThathu; kwaye ukusuka kwinto oyenzele yona njengesiphelo sakho kufuneka ufunde izifundo ezimbini ezibalulekileyo apho onke amava okuphila afundise. Ezi zifundo zilandelayo:
Ungafaka ezi zifundo kubomi abaninzi njengoko uthanda, okanye uzifunde ngokukhawuleza njengoko uya kuthanda-oko kukuthi ugqibe; kodwa ekuhambeni kwexesha uya kuzifunda.
UkuCinga nokuPhelela ➔